ချစ်တင်းနှောပြီးနောက် မလုပ်သင့်သည့် အရာများ – Gentleman Magazine
ချစ်တင်းနှောပြီးနောက် မလုပ်သင့်သည့် အရာများ
သင် သိပါသလား ???
စိတ်ကျေနပ်စရာ အချိန်တစ်ခုကို နှစ်ဦးသားအတူတူဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးမှ သင်လုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုက သင့်ပါတနာကို စိတ်ပျက်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာ…..
ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက် သာယာကျေနပ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတူနေပြီးချိန်မှာ မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ လုပ်လိုက်မဲ့ အရာတစ်ခုက သင့်ပါတနာရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ အတူနေဖို့အတွက် အဆင်မပြေတာမျိုးတွေအထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စက စုံတွဲတော်တော်များများမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကတော့ ချစ်တင်းနှောပြီးပြီးချင်းမှာ တချိုးတည်းအိပ်ပျော်သွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ သာယာကျေနပ်မှုကို ဖျက်စီးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ တချိုးတည်းအိပ်ပျော်သွားတာဟာ အတူနေခဲ့ရတဲ့ သာယာကျေနပ်မှုတွေကို မခံစားတတ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
အတူမနေခင်မှာ ရေအတူချိုးတာက အကောင်းဆုံးအပျိုးဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့် ချစ်တင်းနှောပြီးပြီးချင်း ရေချိုးခန်းထဲမှာ သွားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာက မမှန်ကန်ပါဘူး။ အတူနေနေချိန်မှာ ဘယ်လိုမှမနေပေမယ့် ကိစ္စပြီးသွားရင်တော့ သန့်ရှင်းရေးတန်းလုပ်တတ်သူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် တစ်ဖက်လူက အတူဆက်နေချင်သေးလားဆိုတာကို ထည့်မတွေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အတူနေခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆင်မပြေဘူးများလားလို့ တွေးမိစေနိုင်ပါတယ်။
ချစ်တင်းနှောပြီးခါစမှာ စုံတွဲတွေလုပ်တတ်ကြတဲ့ နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုက ဖုန်းဆက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသာယာကျေနပ်စရာအချိန်ထက် ဘာတွေက ပိုအရေးကြီးနေတာလဲ။ မနက်ရောက်မှာ ပြောလို့ရော မရဘူးလား။ ဒါတင်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ချစ်တင်းနှောတော့မယ်ဆိုရင် သင့်ဖုန်းကနေ မက်ဆေ့ဂ်ျတွေ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ ၀င်လာမလား မျှော်လင့်မနေသင့်ပါဘူး။ သင့်မျက်လုံးနဲ့ နားက ဖုန်းဆီကိုပဲ ရောက်နေရင် အတူနေဖက် ပါတနာအပေါ်မှာ စိတ်မ၀င်စားရာရောက်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
စာဖတ်တာ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်တန်းလုပ်တာ
ချစ်တင်းနှောနေတဲ့ အချိန်မှာ ခေါင်းထဲမှာ ဘာအကြောင်းစဉ်းစားနေလဲဆိုတာက မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ အတူနေပြီးပြီးချင်းမှာ စာဖတ်တာ၊ အလုပ်တွေ တန်းလုပ်တာဟာ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေလိုက်သလိုပါပဲ။ ကိစ္စပြီးသွားတိုင်း ချစ်တင်းနှောတာ ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အိပ်ရာထဲမှာ အတူနေပြီး သာယာကျေနပ်မှုလေးတွေကို ဆက်လက်ခံစားတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
သင်တို့နှစ်ဦးက အိပ်ရာခွဲအိပ်လေ့ရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ချစ်တင်းနှောဖြစ်တဲ့ညမျိုးမှာတော့ ခွဲမအိပ်သင့်ပါဘူး။ အတူနေပြီးတော့မှာ အိပ်ရာထဲမှာ သင့်ပါတနာကို ထားခဲ့ပြီး တခြားမှာသွားအိပ်တာက နည်းလမ်းမကျပါဘူး။ ဒီတစ်ညအတွက် သာယာကျေနပ်မှုကို ပျက်စီးစေရုံသာမက နောက်ထပ်ညတွေအတွက်ပါ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ဦးကြားက သီးခြားကဏ္ဍကို ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မရှိစေရပါဘူး။ ကလေးတွေဆိုရင် ပိုလို့တောင် မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေက ကလေးတွေနဲ့ အတူအိပ်ချင်တဲ့အတွက် ချစ်တင်းနှောပြီးတဲ့အခါမှာ ကလေးတွေကို ခေါ်သိပ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ သင့်ပါတနာက အတူနေပြီးရင်လည်း နောက်ထပ်သာယာကျေနပ်စရာတစ်ခုခုကို စီစဉ်ထားမယ်ဆိုရင် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သွားမှာ သေချာပါတယ်။
အတူမနေခင်မှာ ရိုမန်းတစ်ဆန်တဲ့ ညစာကို အတူစားတာက အရမ်းကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အတူနေပြီးမှ မီးဖိုခန်းထဲသွားပြီး စားစရာတစ်ခုခုရှာစားတာက စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာက သင့်အနေနဲ့ အတူနေနေချိန်မှာ ဗိုက်ဆာနေပြီး အစားစားဖို့ပဲ တွေးနေတဲ့အတွက် သာယာမှုကို မခံစားနိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ သင့်ပါတနာက ထင်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ခဈြတငျးနှောပွီးနောကျ မလုပျသငျ့သညျ့ အရာမြား
သငျ သိပါသလား ???
စိတျကနြေပျစရာ အခြိနျတဈခုကို နှဈဦးသားအတူတူဖွတျသနျးခဲ့ပွီးမှ သငျလုပျဆောငျလိုကျတဲ့ အရာတဈခုက သငျ့ပါတနာကို စိတျပကျြသှားစနေိုငျတယျဆိုတာ…..
ခဈြတငျးနှောခွငျးဟာ နှဈဦးနှဈဖကျစလုံးအတှကျ သာယာကနြေပျမှုကို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အတူနပွေီးခြိနျမှာ မရညျရှယျပဲနဲ့ လုပျလိုကျမဲ့ အရာတဈခုက သငျ့ပါတနာရဲ့ စိတျခံစားမှုကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ နောကျတဈခါ အတူနဖေို့အတှကျ အဆငျမပွတောမြိုးတှအေထိ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ဒီကိစ်စက စုံတှဲတျောတျောမြားမြားမှာ အဖွဈမြားပါတယျ။ နှဈယောကျထဲက တဈယောကျကတော့ ခဈြတငျးနှောပွီးပွီးခငျြးမှာ တခြိုးတညျးအိပျပြျောသှားတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီလိုလုပျတာဟာ သာယာကနြေပျမှုကို ဖကျြစီးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ တခြိုးတညျးအိပျပြျောသှားတာဟာ အတူနခေဲ့ရတဲ့ သာယာကနြေပျမှုတှကေို မခံစားတတျတဲ့သဘောဖွဈပါတယျ။
အတူမနခေငျမှာ ရအေတူခြိုးတာက အကောငျးဆုံးအပြိုးဖွဈစနေိုငျပမေယျ့ ခဈြတငျးနှောပွီးပွီးခငျြး ရခြေိုးခနျးထဲမှာ သှားပွီး သနျ့ရှငျးရေးလုပျတာက မမှနျကနျပါဘူး။ အတူနနေခြေိနျမှာ ဘယျလိုမှမနပေမေယျ့ ကိစ်စပွီးသှားရငျတော့ သနျ့ရှငျးရေးတနျးလုပျတတျသူတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီလိုလုပျတာဟာ ဘာမှမဖွဈလောကျပါဘူးလို့ ထငျရပမေယျ့ တဈဖကျလူက အတူဆကျနခေငျြသေးလားဆိုတာကို ထညျ့မတှေးတာပဲဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခုက အတူနခေဲ့တာနဲ့ပတျသကျပွီး အဆငျမပွဘေူးမြားလားလို့ တှေးမိစနေိုငျပါတယျ။
ခဈြတငျးနှောပွီးခါစမှာ စုံတှဲတှလေုပျတတျကွတဲ့ နောကျထပျအမှားတဈခုက ဖုနျးဆကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုသာယာကနြေပျစရာအခြိနျထကျ ဘာတှကေ ပိုအရေးကွီးနတောလဲ။ မနကျရောကျမှာ ပွောလို့ရော မရဘူးလား။ ဒါတငျမဟုတျသေးပါဘူး။ ခဈြတငျးနှောတော့မယျဆိုရငျ သငျ့ဖုနျးကနေ မကျဆဂြေျ့တှေ၊ ဖုနျးချေါဆိုမှုတှေ ၀ငျလာမလား မြှျောလငျ့မနသေငျ့ပါဘူး။ သငျ့မကျြလုံးနဲ့ နားက ဖုနျးဆီကိုပဲ ရောကျနရေငျ အတူနဖေကျ ပါတနာအပျေါမှာ စိတျမဝငျစားရာရောကျပွီး ပြျောရှငျမှုကို ပကျြစီးစပေါတယျ။
စာဖတျတာ ဒါမှမဟုတျ အလုပျတနျးလုပျတာ
ခဈြတငျးနှောနတေဲ့ အခြိနျမှာ ခေါငျးထဲမှာ ဘာအကွောငျးစဉျးစားနလေဲဆိုတာက မေးခှနျးတဈခုပါ။ အတူနပွေီးပွီးခငျြးမှာ စာဖတျတာ၊ အလုပျတှေ တနျးလုပျတာဟာ ဒီမေးခှနျးကို ဖွလေိုကျသလိုပါပဲ။ ကိစ်စပွီးသှားတိုငျး ခဈြတငျးနှောတာ ပွီးသှားတာမဟုတျပါဘူး။ အိပျရာထဲမှာ အတူနပွေီး သာယာကနြေပျမှုလေးတှကေို ဆကျလကျခံစားတတျဖို့ လိုပါတယျ။
သငျတို့နှဈဦးက အိပျရာခှဲအိပျလရှေိ့တယျဆိုရငျတောငျမှ ခဈြတငျးနှောဖွဈတဲ့ညမြိုးမှာတော့ ခှဲမအိပျသငျ့ပါဘူး။ အတူနပွေီးတော့မှာ အိပျရာထဲမှာ သငျ့ပါတနာကို ထားခဲ့ပွီး တခွားမှာသှားအိပျတာက နညျးလမျးမကပြါဘူး။ ဒီတဈညအတှကျ သာယာကနြေပျမှုကို ပကျြစီးစရေုံသာမက နောကျထပျညတှအေတှကျပါ စိတျပကျြစရာဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
နှဈဦးကွားက သီးခွားကဏ်ဍကို ဘယျသူတဈဦးတဈယောကျကိုမှ ၀ငျရောကျစှကျဖကျခွငျး မရှိစရေပါဘူး။ ကလေးတှဆေိုရငျ ပိုလို့တောငျ မဖွဈသငျ့ပါဘူး။ တဈခြို့အမြိုးသမီးတှကေ ကလေးတှနေဲ့ အတူအိပျခငျြတဲ့အတှကျ ခဈြတငျးနှောပွီးတဲ့အခါမှာ ကလေးတှကေို ချေါသိပျတတျပါတယျ။ ဒီလိုလုပျတာဟာ သငျ့ပါတနာက အတူနပွေီးရငျလညျး နောကျထပျသာယာကနြေပျစရာတဈခုခုကို စီစဉျထားမယျဆိုရငျ စိတျပကျြစရာဖွဈသှားမှာ သခြောပါတယျ။
အတူမနခေငျမှာ ရိုမနျးတဈဆနျတဲ့ ညစာကို အတူစားတာက အရမျးကောငျးတဲ့အခကျြပါ။ ဒါပမေယျ့ အတူနပွေီးမှ မီးဖိုခနျးထဲသှားပွီး စားစရာတဈခုခုရှာစားတာက စိတျပကျြစရာကောငျးပါတယျ။ ဒီလိုလုပျတာက သငျ့အနနေဲ့ အတူနနေခြေိနျမှာ ဗိုကျဆာနပွေီး အစားစားဖို့ပဲ တှေးနတေဲ့အတှကျ သာယာမှုကို မခံစားနိုငျဖွဈနတေယျလို့ သငျ့ပါတနာက ထငျသှားစနေိုငျပါတယျ။
Previous: အိပ်နေရင်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
Next: ထူးခြားသော ငွေစာရင်းတစ်ခု